4dị XNUMX Kachasị Mmetụta N'afọ a na Ọdịnaya Dijitalụ | Martech Zone
Obi dị anyị ezigbo ụtọ maka ọbịbịa anyị webinar na Meltwater na ọdịnaya na njem ndị ahịa. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ahịa ọdịnaya nwere ma na-aga n'ihu na-agbanwe. N'otu akụkụ, omume nke ndị ọrụ agbanweela etu esi eri ọdịnaya yana otu ọdịnaya si emetụta njem ndị ahịa. N'akụkụ nke ọzọ, ndị na-ajụ ase agbanweela, ikike iji tụọ nzaghachi, yana ike ịkọwapụta ewu ewu nke ọdịnaya.
Jide n'aka na- debanye aha maka webinar! Anyị ga-ekesa akwụkwọ m n’oge na-adịbeghị anya maka onye ọ bụla bịara.
Echefu ịnwa ịgbaso mgbanwe niile mere n’ahịa thisntanetị n’afọ gara aga. Ọ ga-ewe gị ruo oge a n’afọ ọzọ ka ị depụta ha. Ya mere kama iweghara oge buru ibu na nke na-enweghị isi, nke kachasị ọhụrụ ozi sitere na Mgbasa Ozi MDG mee ngwa ngwa kọwaa ụdị ọdịnaya ị chọrọ ịma karịa.
MDG achọtala igodo 4 ọnọdụ ndị na-emetụta ire ahịa ọdịnaya dijitalụ azum:
Onye ọrụ ugbu a na eze na-elekọta, na ọzọ ndị na-ajụ ase dị ka pọdkastị na-eto.
A na-eri vidiyo karịa na ndị ọzọ ekwentị mkpanaaka.
Ginglọ ọrụ ịde blọgụ na-aga n'ihu na-etiti nke ihe ịga nke ọma ọdịnaya dijitalụ.
Mgbasa ozi na-enye ohere nkwalite ọhụụ pụrụ iche maka ọdịnaya gị.
Tags: 2015ọnọdụ ọdịnayaọdịnaya dijitalụụdịdị dijitalụ na-eme